Shina 2007: Nomena loka BoBs ny Shinoa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Janoary 2020 4:59 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, Español, Français, English
(Lahatsoratra nivoaka tamin'ny volana Oktobra 2007)
Tamin'ny taona 2007, nanomboka ny 22 Oktobra 2007 ny fifidianana tamin'ny bilaogy tsara indrindra Best of Blogs: afaka nifidy tamin'ny aterineto ho an'ny bilaogy, bilaogin-dahatsary ary ny rakipeo ny mpisera. 7.000 no notendrena manerana izao tontolo izao araka ny Deutsche Welle.
Tafiditra tao anatin'ny lisitry ny voafidy hifaninana ny bilaogy Shinoa miisa 15. Avy amin'ny bullog.com ny telo tamin'izany dia ny Eight Continents (rohy maty), Love Letter (rohy maty) ary ny Peaceful side of Luo (rohy maty). Saingy, tena hafahafa, fa nikatona vonjimaika nanomboka ny herinandro mialoha izany ny bullog.com (rohy maty). Tsy fantatra anefa na avy amin'ny Kongresin'ny Antoko faha-17 izany na noho ny fanendrena tamin'ny BoBs.
Tao anatin'ny fizarana fanehoan-kevitra tao amin'ny tranonkala BoBs momba ny “The peaceful side of Luo” dia nampifandray ny fanakatonana ny bullog tamin'ny fahombiazan'ity tranonkala ity ny mpaneho hevitra iray antsoina hoe cmyk:
Iharan'ny fanitsakitsahana mora foana ny olona tsara; izany no mahazo ireo any Shina.
Ho takatr'i Lao Lou ny lojika noho ity fanakanana ny bullog ity.
Lao Lou no nanorina ny bullog, mpitaridalana tena manan-danja ao amin'ny tontolon'ny bilaogy Shinoa.
Soa ihany fa mitahiry ny bilaoginy any an-kafa ireo bilaogera etsy ambony rehetra ireo. Ao amin'ny Sohu ny arsivan'i Lao Lou. Manana toerana ao amin'ny my1510 ny Drunkpiano avy amin'ny Love Letters ary azo jerena ao amin'ny blogcn ny sasany amin'ireo arsivany .
Voatendry ho Best Weblog na bilaogy tsara indrindra kosa ny Eight Continents ary ato ny Bilaogy Shinoa tsara indrindra sy ny arsivany. Mpanao gazety nanoratra ny tatitra lalina indrindra momba ny fihetsiketsehana manohitra ny PX Xiamen (fihetsiketsehana manohitra ny fananganana orinasa simika) volana vitsy lasa talohan'izay ity bilaogera ity .
Fatiantoka lehibe ny fanakatonana ny bullog satria mampiantrano bilaogy malaza maro izy io. Nantenaina fa hiverina tsy ho ela araka izay azo atao izany. Azonao atao ny mijery ny arsivan'ireo bilaogera ao amin'ny bullog ato amin'ity adiresy ity.
Ankoatra ny bullog, misy ihany koa ireo ezaka iraisan'ny rehetra ao anatin'ity lisitr'ireo mpifaninana tamin'ity taona 2007 ity:
Memedia : gazetiboky iray miseho isan-kerinandro ao amin'ny tontolon'ny bilaogy, nosoratana tamin'ny alàlan'ny fomba fiasan'ny Wiki. (Ny bilaogy Shinoa tsara indrindra)
Inmediahk.net : tranonkala fanoratan'olon-tsotra mavitrika indrindra ao Hong Kong. (Bilaogy Shinoa tsara indrindra)
Minjian: gazetiboky an-tserasera momba ny fampandrosoana sosialy sy politika. Ny teny filamatr'ity vondrona dia ny hoe “afaka manova ny fisiantsika ny hetsika sosialy” (loka Reporters Sans Frontieres)
Ge zhi: bilaogy iraisana momba ny lohahevitra siantifika. (Bilaogy Shinoa tsara indrindra)
Ireo ezaka vitan'ny tsirairay avy amin'ny bilaogy Shinoa tsara indrindra:
The colourful world : Maty ilay bilaogera tompon'ny fanoratana voalohany, Liu Xiao Juan, noho ny homamiadan'ny havokavoka tamin'ny fiandohan'ny taona 2007. Ary ny vadiny no manavao ny vaovao amin'ny bilaogy.
Kaku’s blog : bilaogin'ny mpianatra iray
Peasant Worker’s blog: maneho hevitra momba ny olana sosialy avy amin'ny fomba fijerin'ny mpiasa mpifindra monina avy any ambanivohitra ity bilaogera ity.
Zola Zhou : bilaogera mpanora-gazety izay nahazo ny lazany tamin'ny alàlan'ny tatitra momba ny trano nofantsihina tao Chongqin. Na izany aza, vao haingana izy no nokianin'ireo bilaogera marobe teo an-toerana noho ny nahazoany loka tamin'ny tatitra nataony.
Voafidy ho an'ny Best Podcast na rakipeo tsara indrindra i Princess Remy . Shinoa roa no notendrena ho an'ny Best Videoblog na bilaogin-dahatsary tsara indrindra, Chopsticks brother’s videoblog sy Cat’s Ear Baby’s Videoblog. Ny Very True Man no voatendry amin'ny Loka Blogwurst Shinoa.